चीनमा फल्दैछन् माओको अनुहार भएका लौका, अरु अनुहारका पनि पाइन्छन् – Everest Dainik
चीनमा फल्दैछन् माओको अनुहार भएका लौका, अरु अनुहारका पनि पाइन्छन्
बजारमा तरकारी किन्न जाँदा पसलेले “कस्तो अनुहारको लौका दिऊँ?” भन्यो भने तपाईं के उत्तर दिनुहोला? लौकाको अनुहार नै के भन्नु र? हो, आकार भनेको खण्डमा भने लाम्चो, गोलो, डल्लो या फर्सीजस्तो केही छनौटहरू उपलब्ध होलान् ।
तर अचेल प्रविधिमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहने चीनले भने त्यहाँका तरकारी पसलेहरूलाई “कुन अनुहारको लौका दिऊँ?” भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष माओ जस्तो, बुद्ध जस्तो, कन्फ्युसियस, लाओत्से या येसु ख्रीष्ट जस्तो भन्ने छनौटको अवसर प्राप्त भएको छ ।
सीबाट नै सिकेर अचेल चीनका अन्य किसानहरूले पनि अनुहार भएका लौका फलाउन सिकेका छन् ।
अब यो प्रयोग नासपाती लगायत अन्य फल्हारूमा समेत पगरिन थालेको छ ।
हो, अब यदि चीन जानु भयो र लौका किन्ने विचार गर्नु भयो भने कुन अनुहारको लौका चाहिन्छ भन्न नहिच्किचाउनुस् । कुनै प्रसिद्ध राजनेताको, धर्मगुरुको, देउताको, सिने कलाकारको या कुनै सुन्दरीको सुगठित शरीरको आकारको, सब पाइन्छ !
ट्याग्स: Moulded vegetables, चीन, माओत्से तुङ